Health – Live Nepal News
भलै सन्तान पैदा गर्नु भनेको महिलाहरुको हकको कुरा हो । तर जापानमा चाहिँ कुनैपनि महिलाले गर्भाधारण गर्नका लागि हाकिमको इजाजत लिनुपर्दछ, अन्यथा अपमान झेल्नुपर्दछ । समाचार अनुसार जापानको एक कम्पनीले आफ्नो एकजना महिला कर्मचारीलाई विना जानकारी गर्भवती भएको भन्दै प्रताडित तथा अपमानित गरेको खुलासा भएको छ । साथै कम्पनीले आफ्ना …
हस्तमैथुन आत्मरतिको सबैभन्दा सजिलो र बहुपरिचित माध्यम हो । यौनसाथी सँगसँगै बसेर अलगअलग गर्ने वा परस्परमा एकअर्कालाई गरिदिने हस्तमैथुनलाई पारस्परिक हस्तमैथुन भनिन्छ । हस्तमैथुन सबै उमेर र लिंगका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने आत्मरतिको माध्यम हो । दुब्लो हुनुमा हस्तमैथुनको भूमिका कतै हस्तमैथुनले हानी गर्छ कि ? धेरैमा चासो र चिन्ता हुन्छ …
५ मिनेटमै ढाड दुख्ने र खुट्टा दुख्नेसमस्याबाट छुट्कारा, मात्र यी ५ सरल व्यायामबाट
एजेन्सी – खुट्टा शरीरको महत्वपूर्ण भाग हो । विभिन्न शारिरीक कसरतहरु गर्दा खुट्टाकै आधार लिनुुपर्ने हुन्छ । त्यसैले खुट्टाको हेरविचार गर्न निकै नै आवश्यक छ । यसले खुट्टा र ढाड दुख्ने समस्याबाट चाडैं छुट्कारा दिलाउँछ । प्रकारका कसरतहरुको बारेमा जानकारी दिन्छौं । यस व्यायामलाई नियमित रुपमा गर्नसकेमा खुट्टासम्बन्धि विभिन्न समस्याबाट …
नयाँ अध्ययनः घाउ निको पार्न चिनीको प्रयोग प्रभावकारी जानकारीको लागी सेअर गरौ
खुशी अर्थात् सुखमा ‘केही मीठो खाउँ न’ भन्ने शब्द हरकोहीको मुखबाट निस्किन्छ। जब कसैलाई चोट लागेर घाउ बन्यो र ‘केही मीठो राख्देउ’ भन्ने अवस्था आयो भने के होला? चिनीले घाउ निको पार्न ‘एन्बिायोटिक’को भन्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । अहिले अमेरिका र बेलायतका केही डाक्टरले …
के भएको होला यीनलाई ? फूर्तिला र राम्रा थिए तर अहिले कुरुप बने, कारण यस्तो छ
तस्बिरमा देखिएका व्यक्ति एक चिनियाँ पुरुष हुन, जो झट्ट हेर्दा अर्को कुनै ग्रहबाट आएका जस्ता देखिन्छन् । जन्मदा उनी अन्यन्तै सुन्दर थिए । युवा अवस्थामा पनि सामान्य व्यक्ति सरह फूर्तिला र राम्रा थिए । तर अहिले कुरुप बनेका छन् ।उनको समस्यालाई चिकित्सकीय भाषामा फेसियल हाईपरप्लासिया अर्थात अस्वभाविक रुपमा तन्तुहरुको बृद्धि …
सावधान… नङ टोक्ने मानिसलाई “पारोनाइसिया” नामक रोगको खतरा। ज्ञान बाढ्नुनै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो त्यसैले १ सेयर गर्नुहोला
मानिसको प्राय सबैको एउटा एउटा अधत हुन्छ । कतिपय मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ । बालबालिकामा यस्तो बानी देखिनु सामान्य हो । तर, युवायुवती या पाका उमेरका मानिस नै नङ टोकीरहेका हुन्छन् ।नङ टोक्ने बानी खराब हो । त्यसैले अभिभावकहरुले बालबालिकालाई नङ टोक्नु हुँदैन भनेर सिकाउनुपर्छ । नङ टोक्ने बानीले …
विवाहमा कति उमेर फरक राम्रो ? जानी राखौँ
अधिकांश पुरुष आफूभन्दा कम उमेरका लाई विवाह गर्न रुचाउछन् । भविष्यमा त्यही उमेर भिन्नताले यौन जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइदैंन । चिकित्सकहरु विवाहका लागि बढीमा ५ वर्षसम्मको मात्र ग्याप राम्रो हुने बताउछन् । एकै उमेरमा विवाह गर्दा भावनात्मक सम्बन्ध र सोचाइ पनि मिल्ने भएकाले धेरै …
आजकल धेरै मानिस यौनसम्बन्धी कमजोरीबाट पीडित रहेको पाइन्छ । नपुंसकता, स्पनदोष, धातु दोष तथा सिघ्र स्खलन आदि । यसका अनेक कारण छन्, जस्तो कि हस्तमैथुन, अत्याधिक उत्तेजनायुक्त फिल्म हेर्नु, उत्तेजक लेख पढ्नु, असंयमित खानपान, शरीरमा पोशक तत्वको कमी आदि । तर, बजारमा यौन समस्या समाधान गर्ने भनेर थरी-थरीका औषधि पाइन्छन् …
अदुवा जसको सेवनले बचाउछ धेरै जटिल रोगहरु बाट हेर्नुस यसका फाइदाहरु
हामी चिया र तरकारीमा अदुवा दैनिक प्रयोग गर्ने गर्छौँ । हामी अदुवाको प्रयोगले खान स्वादिष्ट हुनेमा त जानकार छौँ तर त्यसको दैनिक नियमित प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ र कैयौँ रोगवाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । आउनोस मानव स्वास्थ्यको लागी अदुवाको महत्व र प्रयोग बिधी बुँदागत …